ဆော်ကြည်ချင်လား ? ဒါတွေစား….! | yathar Magazine
မင်ျဂလာဦးညမှာ ကွငျနာယုယစှာနဲ့ ပညာတခုပွမှာ…သီတငျးကြှတျပီလေ..
သနျမာထှားကွိုငျးပီး ယောကျြားပီသ ဖို့ အကွောငျးအမြိုးမြိုး ကွောငျ့ အနှောကျအယှကျ ဖွဈနတေဲ့ Hardcore တှေ အတှကျ.
စားသငျ့တဲ့ အစားအသောကျလေးတှေ ပွောပွမယျ။
ကယျလျဆီယမျ ၁ % ၊ မဂ်ဂနီဆီယမျ ၈%၊ ပိုတကျဆီယမျ ၁၂% ခန်ဓာကိုယျအတှကျထောကျပံ့ ပေးနိုငျပါတယျ။
ဖီးကွမျးတဈဖီးရဲ့ ဘေးအစှနျဆုံးအလုံး(သုံးထောငျ့သီး) အကောငျးဆုံးပဲ ဓာတုဆေးဝါးမပါတဲ့ ပငျမှညျ့ကိုရှာ
သုံးဆောငျကွညျ့ပါ။ (ဆရာကွီးတှဆေို နပျတယျ)
၂။ ခရု၊ ကမာ၊ ဂုံး
အခှံမာ၊ အခှံပြော့ ရနေသေတ်တဝါ သေးသေးလေး တှကေ လညျး ဆေးပဲ။ တကျစတိုစတီရုနျး ဟောမုနျးပမာဏကိုမွငျ့တငျပေးတဲ့ အတှကျ လိငျစိတျဆန်ဒကို မွငျ့တကျစပေါတယျ။ Zinc ဓာတျ လညျး ပါဝငျတာကွောငျ့ Sparm အရညျအသှေးကို အထောကျအကူပေးပါတယျ။
ကွကျဥ၊ ဘဲဥ တှေ ထကျ ပရိုတငျး အမွငျ့ဆုံးပါဝငျတာ က ငုံးဥ ဖွဈပါတယျ။ တောကွကျဥ အစဈဆိုလညျး
အနံ့ သိပျပွငျးတယျ ၊ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အကြိုးကြေးဇူးမြား စတေဲ့ ကွကျသှနျဖွူ ဟာ သှေးလညျပတျမှု ကို
ကောငျးစတေဲ့ အတှကျ နှလုံးခုနျနှုနျးနဲ့ သှေးဖိအားကို ထိနျးပေးနိုငျတယျ၊ သုတျသှေးကို အားဖွဈတဲ့ အစားအစာဖွဈပါတယျ။
ငါးအနနေဲ့ မကွိုကျတဲ့သူ နညျးနညျး ရှိပမေဲ့ သူရဲ့ အာဟာရက တော့ အပိုအလိုသိပျမရှိပါဘူး၊
ငါးခူရဲယိုခကျြ မြိုး ၊ ဆောလမှနျ ဆူရှိ အစ ရှိတဲ့ ဟငျးတှကေ တော့ အားဆေးပါနျော ၊ သူတို့ဆီမှာ အိုမီဂါ ၃ အကျစဈ အမြားအပွားပါဝငျသောကွောငျ့ သှေးခဲခွငျး ကိုလြော့နညျးစပေါတယျ။
ရိုးတှငျးခွငျဆီကို တိုးပှားစသေညျ၊ သုတျခမျးသုတျကြဲ ရောဂါ ကို ကုသနိုငျတယျ၊( ဆိတျစှပျ၊ဆိတျပဲ)
အစားနညျးပမေဲ့စားသငျ့သော အထဲမှာတော့ ပါတဲ့ အသားတမြိုး ဖွဈပါတယျ။ (သုတျအားကို ပွနျလညျပွညျ့ဝစသေညျ)
လိုအပျသော အကွောမြားကို သနျမာစသေညျ၊ မွနျခငျြး အိမျမကျယောငျ၍ သုတျထှကျခွငျး မြားကို ပြောကျကငျးစသေညျ။
နို့ထှကျပစ်စညျးတခုဖွဈတဲ့ ဒိနျခဉျြဟာ ခန်ဓာကိုယျ ရဲ့ ကိုလကျစတော ကို ကစြတေယျ၊ ကုနျခမျးသှားသော အားအငျမြားကို အစာအိမျက လငျြမွနျစှာစုပျယူနိုငျရနျ အထောကျအကူ ပေးသညျ။
ငရုတျသီးတောငျ့ ရဲ့ Hot ဖွဈမှု က သငျ့ရဲ့ လိငျမှု ဆိုငျရာ စှမျးအားကို မွှငျ့တငျပေးတယျဆိုတာ ယုံပါသလား ? ငရုတျသီးရဲ့ အပူဓာတျဟာ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ သှေးလညျပတျမှု ကိုအားကောငျးစသေောကွောငျ့ နှလုံး အပါအဝငျ လိငျအင်ျဂါ အစိတျအပိုငျးမြား အထိ သှေးစီးဆငျးမှု ကို အားသနျစပွေီး ကိုလကျစတော ပမာဏ ကိုကဆြငျးစကော သှေးခဲခငျြးကို ကာကှယျပေးပါတယျ။
ဒီတပတျတော့ အမြိုးသားတှေ အတှကျ မာကွီးရှညျ(ကနျြးမာ၊ ဘုနျးတခိုးကွီး၊ အသကျရှညျ) စမေယျ့ အစားအသောကျ ၁၀မြိုးကို ပွောပွခဲ့ခငျြးဖွဈပါတယျ၊ တခွားဘယျလို အစားအစာတှေ ကနျြသေးလဲ?
မင်္ဂလာဦးညမှာ ကြင်နာယုယစွာနဲ့ ပညာတခုပြမှာ…သီတင်းကျွတ်ပီလေ..
သန်မာထွားကြိုင်းပီး ယောကျာ်းပီသ ဖို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေတဲ့ Hardcore တွေ အတွက်.
စားသင့်တဲ့ အစားအသောက်လေးတွေ ပြောပြမယ်။
ကယ်လ်ဆီယမ် ၁ % ၊ မဂ္ဂနီဆီယမ် ၈%၊ ပိုတက်ဆီယမ် ၁၂% ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဖီးကြမ်းတစ်ဖီးရဲ့ ဘေးအစွန်ဆုံးအလုံး(သုံးထောင့်သီး) အကောင်းဆုံးပဲ ဓာတုဆေးဝါးမပါတဲ့ ပင်မှည့်ကိုရှာ သုံးဆောင်ကြည့်ပါ။ (ဆရာကြီးတွေဆို နပ်တယ်)
၂။ ခရု၊ ကမာ၊ ဂုံး
အခွံမာ၊ အခွံပျော့ ရေနေသတ္တ၀ါ သေးသေးလေး တွေက လည်း ဆေးပဲ။ တက်စတိုစတီရုန်း ဟောမုန်းပမာဏကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့ အတွက် လိင်စိတ်ဆန္ဒကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ Zinc ဓာတ် လည်း ပါဝင်တာကြောင့် Sparm အရည်အသွေးကို အထောက်အကူပေးပါတယ်။
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ တွေ ထက် ပရိုတင်း အမြင့်ဆုံးပါဝင်တာ က ငုံးဥ ဖြစ်ပါတယ်။ တောကြက်ဥ အစစ်ဆိုလည်း အား ဖြစ်စေတယ်။
အနံ့ သိပ်ပြင်းတယ် ၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးများ စေတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ဟာ သွေးလည်ပတ်မှု ကို ကောင်းစေတဲ့ အတွက် နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ သွေးဖိအားကို ထိန်းပေးနိုင်တယ်၊ သုတ်သွေးကို အားဖြစ်တဲ့ အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။
ငါးအနေနဲ့ မကြိုက်တဲ့သူ နည်းနည်း ရှိပေမဲ့ သူရဲ့ အာဟာရက တော့ အပိုအလိုသိပ်မရှိပါဘူး၊ ငါးခူရဲယိုချက် မျိုး ၊ ဆောလမွန် ဆူရှိ အစ ရှိတဲ့ ဟင်းတွေက တော့ အားဆေးပါနော် ၊ သူတို့ဆီမှာ အိုမီဂါ ၃ အက်စစ် အများအပြားပါဝင်သောကြောင့် သွေးခဲခြင်း ကိုလျော့နည်းစေပါတယ်။
ရိုးတွင်းခြင်ဆီကို တိုးပွားစေသည်၊ သုတ်ခမ်းသုတ်ကျဲ ရောဂါ ကို ကုသနိုင်တယ်၊( ဆိတ်စွပ်၊ဆိတ်ပဲ)
အစားနည်းပေမဲ့စားသင့်သော အထဲမှာတော့ ပါတဲ့ အသားတမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ (သုတ်အားကို ပြန်လည်ပြည့်ဝစေသည်
လိုအပ်သော အကြောများကို သန်မာစေသည်၊ မြန်ချင်း အိမ်မက်ယောင်၍ သုတ်ထွက်ခြင်း များကို ပျောက်ကင်းစေသည်။
နို့ထွက်ပစ္စည်းတခုဖြစ်တဲ့ ဒိန်ချဉ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ ကိုလက်စတော ကို ကျစေတယ်၊ ကုန်ခမ်းသွားသော အားအင်များကို အစာအိမ်က လျင်မြန်စွာစုပ်ယူနိုင်ရန် အထောက်အကူ ပေးသည်။
ငရုတ်သီးတောင့် ရဲ့ Hot ဖြစ်မှု က သင့်ရဲ့ လိင်မှု ဆိုင်ရာ စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးတယ်ဆိုတာ ယုံပါသလား ? ငရုတ်သီးရဲ့ အပူဓာတ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သွေးလည်ပတ်မှု ကိုအားကောင်းစေသောကြောင့် နှလုံး အပါအ၀င် လိင်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများ အထိ သွေးစီးဆင်းမှု ကို အားသန်စေပြီး ကိုလက်စတော ပမာဏ ကိုကျဆင်းစေကာ သွေးခဲချင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဒီတပတ်တော့ အမျိုးသားတွေ အတွက် မာကြီးရှည်(ကျန်းမာ၊ ဘုန်းတခိုးကြီး၊ အသက်ရှည်) စေမယ့် အစားအသောက် ၁၀မျိုးကို ပြောပြခဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်၊ တခြားဘယ်လို အစားအစာတွေ ကျန်သေးလဲ?